Kismaayo News » Dhagar qabe lagu qabtay Garisa
Dhagar qabe lagu qabtay Garisa
Kn:Xarunta gobolka Waqooyi Bari ee magaalada Garisa ayaa lagu qabtay dhagar qabe ka danbeeyay dad dhawr ah oo lagu khaarajiyay magaalada xiliyo kala duwan.
Dhagar qabaha ayaa la sheegay inuu Isbitaalka ooga daba tagay oday magaalada muctarif ka ah oo uu toogashu ku dilay, laakiin tiisa aysan galin. Sida aan wararka ku helayno dhagar qabaha ayaa isbitaalka ku booqday odayga uu toogtay si uu u soo xaqiiqsado warar sheegaya inuu noolyahay oo uu maqlay, wuxuuna u tagay dhibanihii oo dad badan dul joogaan.
Dhagar qabaha ayaa banaanka uga soo baxay qolkii dhibanuhu yaalay waxuuna qabsaday taleefan uu kula hadlayay qoladii amarka khaarajinta ah ku soo amartay. Nasiib wanaag wiil dhalinyaro ah oo gadaashiisa taagnaa ayaa maqlay asagoo leh “ninkii aan idin iri waan dilay, wuu noolyahay, aniguse mayd ahaan ayaan ooga tagay, markii la ii sheegayna haddaan isbitaalka oogu imid si aan u xaqiiqsado”.
Wiilkii ayaa markiiba boolis goobta ku sugnaa farta ugu fiiqay dhagar qabaha, kadibna gacanta ayaa lagu dhigay. Wararka hordhaca ah ee soo baxaya waxay sheegayaan inuu dhagar qabaha qirtay falka khaarajinta ah ee Odaygu ka badbaaday, wuxuuna sidoo kale sheegtay inuu sadex ruux oo kale oo xiliyo kala duwan magaalada lagu dilay uu qaarna gasytay qaarna lug ku lahaa.
Waa dhagar qabihii koobaad oo gacanta lagu dhigo tan iyo intii ay magaalada Garisa ka bilaabmeen dilalka qorshaysan ee lagu xabad siibayo dadka bulshada wax galka u ah.
Daayacaad baahsan oo dhinaca ciidamada amniga ah iyo ka seexasho siyaasiyiinta Gobolka doorka kaga aadanaa badbaadinta bulshada loo doortay ayaa Garisa oo mar ahaan jirtay magaalada ugu nabdoon magaalooyinka Geeska Afrika, waxay u rogtay in shacabkii inta laga daalay iska dilitaankoodii in markii danbe har cad loo dhigto in ayagii suuqa lagu laayo.